Manambady ve i Kristen Stewart? Ny zava-drehetra momba ny fifandraisany tamin'ny mpiara-miasa aminy Dylan Meyer satria hitan'izy ireo manao 'peratra mariazy' - Pop-Kolontsaina
Manambady ve i Kristen Stewart? Ny zava-drehetra momba ny fifandraisany tamin'ny mpiara-miasa aminy Dylan Meyer satria hitan'izy ireo manao 'peratra mariazy'
Kristen Stewart dia vao tsy ela akory izay no hita tao LAX niaraka tamin'i Dylan Meyer mpiara-miasa aminy. Ny paparazzi dia naka maro sarin'ny mpivady izay mampiseho an'izy ireo manao peratra volamena mifanentana amin'ny rantsan-tànany ankavia eo am-pivoahana ny seranam-piaramanidina.
Ny sasany dia naminavina raha nanambady miafina izy roa. Stewart sy mpanoratra dia Meyer lasa mpivady ampahibemaso tamin'ny Aogositra 2019.
Tamin'ny volana novambra 2019, raha nanao fisehoan'ny vahiny tao amin'ny Howard Stern Show izy, Kristen Stewart dia nanambara fa tsy afaka miandry ny hanolo-tena an'i Meyer izy.
Ny kintana Twilight dia nalaza tamin'ny voalohany tamin'ny alàlan'ny fanitsiana nataon'i Stephanie Meyer tamin'ny andiany. Nandritra ny foto-kevitry ny sarimihetsika, ilay lehilahy 31 taona niaraka tamin'i Robert Pattinson talohan'ny nanambazana azy fa namitaka azy tamin'i Snow White sy ny talen'ny Huntsman Rupert Sanders.
inona no handefasana hafatra amin'ny bandy aorian'ny daty voalohany
Fotoana fohy taorian'izay dia nivoaka toy ny hafahafa i Stewart ary niaraka tamin'i Alicia Cargile sy Soko talohan'ny nifaranany tamin'i Dylan Meyer.
Tombantombana amin'ny fifandraisan'i Kristen Stewart sy Dylan Meyer
Niresaka momba ny antsipirian'ny fifandraisany ho toy ny 'karazana kodiarana' i Kristen teo am-piandohana ny miresaka momba an'i Meyer.
Tamin'ny resadresaka nifanaovany tamin'i Howard Stern tamin'ny volana novambra, dia nanambara ilay teratany Los Angeles, Kalifornia fa nahafantatra an'i Dylan Meyer izy nandritra ny enin-taona teo. Rehefa nilaza i Kristen Stewart hoe 'tiako ianao' tamin'ny farany, dia nifanatrika nandritra ny roa herinandro teo ry zareo.
Lahatsoratra iray nozarain'i Dylan Meyer (@spillzdylz)
Ny paparazzi izay naka ny sarin'i Kristen Stewart sy Dylan Meyer dia naminavina mazava fa nandeha nankany amin'ny toerana tsy fantatra ny mpivady mba hanambady. Na dia tsy saro-kenatra momba ny hafanam-pony amin'ny fangatahana aza ity voalohany, dia tsy nisy loharanom-baovao akaiky hanamafisana ny mety ho tsaho.
Ilay mpilalao sarimihetsika dia efa nilaza izany momba an'i Meyer:
'Samy avy any LA izahay, ary tena tia an'i LA. Samy karazan'olom-bitsy isika. Samy nahatsapa ho toy ny troll izahay mirahalahy. Mitovy izahay fa hafa. Mpanoratra izy; mahay izy. '
Vakio ihany koa: 'Manana sipa aho': nilaza i Adin Ross fa tsy niaraka tamin'i Corinna Kopf mihitsy izy
Tsy manana kaonty Instagram i Kristen Stewart, fa i Dylan Meyer kosa. Na izany aza, ity farany dia tsy nametraka fanamarinana momba ny tsaho momba ny fanambadian'izy roa.
Tsy mbola naneho hevitra momba izany i Kristen Stewart.
Vakio ihany koa: Iza no mampiaraka amin'i Cole Sprouse? Ny tantara rehetra momba ny sipa vaovao antsoina hoe Ari Fournier dia mizara ny sariny ao amin'ny Instagram
ny vadiko tsy tapaka amin'ny telefaoniny
manao ny fiainako ve aho
ny fomba hivoahana amin'ny lehilahy maditra
aho, tsy fantatro izay te-ho eo amin'ny fiainana
tiako ve izy sa ny heviny
ny fomba fanoratana taratasy fitiavana
jamie watson jamie lynn lefona
famantarana tsy tiany intsony ianao